Abalingane bakaGlass Lewis kunye neArabesque yokuqaqambisa ugcino kuzinzo kubatyali mali kunye nakumashishini
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Abalingane bakaGlass Lewis kunye neArabesque yokuqaqambisa ugcino kuzinzo kubatyali mali kunye nakumashishini
I-Arabesque, inkokeli yehlabathi kwiinkcukacha ze-ESG kunye nokuqonda, kunye noGlass Lewis, umboneleli ophambili wezisombululo zolawulo lwehlabathi, namhlanje ubhengeze ubuhlakani obutsha bokubonelela ngobuninzi babatyali zimali kunye neenkampani kumashishini akhokelayo kubuhlakani bokugcina ubambiswano lokuvota kunye nomnini zabelo ukubandakanyeka.
Ubambiswano luya kubona i-Arabesque ibonelela ngenkangeleko ye-ESG yenkampani kwiingxelo zophando lweGlass Lewis 'Proxy Paper, ezenza ukuba abathengi bafumane idatha ye-ESG yamva nje kunye nokuqonda kwiinkampani ezingaphezu kwe-8,000 kwihlabathi liphela, kunye nokufikelela kwizisombululo zedatha yemozulu kunye nolawulo. Sebenzisa idatha enkulu kunye nobungakanani, indlela yealgorithmic, amandla e-Arabesque atsala ngaphezulu kwesigidi seedatha zeedatha ze-ESG mihla le ukusuka kwimithombo engaphezulu kwama-30,000 yemetriki yokusebenza kozinzo, kubandakanya ulungelelwaniso lwenkampani.
Isibhengezo siza njengoko inzala yotyalo-mali kulwazi lwe-ESG iqhubeka nokunyuka, malunga nesinye kwisithathu sezinto zonke eziphantsi kolawulo ngoku zidibanisa ukuqwalaselwa kokuzinza, kunye nesihlanu seenkampani zikarhulumente zikarhulumente ezingama-2,000 26 ezithembisa ukuhlangabezana neethagethi ze-zero-zero phambi kweCOPXNUMX UN Climate Guqula iNkomfa.
Ethetha ngesibhengezo sanamhlanje, uGqirha Daniel Klier, uMongameli wase-Arabesque, uthe:
“Kule minyaka idlulileyo, sikubonile ukunyuka okungazange kubonwe ngaphambili kwe-ESG njengenyathelo eliphambili elibumba kwakhona iimakethi ezinkulu, kunye nee-asethi ze-ESG zehlabathi ezisendleleni yokudlula i-50 yezigidi zeedola ngo-2025. idatha enokwenza ukwenziwa kwezigqibo okungcono kunye nokonyusa ulawulo lweengozi kunye namathuba e-ESG. ”
"Ngokubandakanya idatha eqhutywa yitekhnoloji ye-ESG eqhutywa yi-Arabesque kunye nokuqonda ecaleni kweengxelo zophando lweProxy Paper ekhokelela kwimarike kaGlass Lewis, obu buhlakani bobuchule buza kwenza abatyali zimali abaphambili behlabathi bakhawulezise uhlalutyo lobuchule bokusebenza kozinzo lweshishini. Sisonke, sonwabile ukuhambisa izisombululo eziza kunceda bonke abaninizabelo. ”
UDan Concannon, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo ngeGlass Lewis, uthe:
“Abatyali mali kunye neenkampani zikarhulumente ezivela kwihlabathi liphela zixhomekeke kulwazi oluvela kuGlass Lewis ekwenzeni izigqibo ezibalulekileyo zolawulo. Imicimbi ye-ESG iye yaba ngumceli mngeni obandayo ofuna ukujongwa nzulu kwintsebenzo yozinzo lweshishini. Sikholelwa ekubeni ubambiswano lwethu ne-Arabesque ukuzisa ulwazi olunzulu kunye nokufikelela kwi-ESG, imo yezulu, kunye nedatha yolawulo iya kuba sisixhobo esibalulekileyo kwinkqubo yobugosa. ”
Ngaphezulu kwe-1,300 yabathengi beziko, kubandakanya uninzi lwezicwangciso zepenshini ezinkulu zehlabathi, iimali ezihlangeneyo, kunye nabaphathi beeasethi abalawula ngokudibeneyo ngaphezulu kwe- $ 40 trillion kwiiasethi, sebenzisa uphando lukaGlass Lewis kunye nezisombululo zetekhnoloji ukwazisa kunye nokwenza lula imisebenzi yabo yolawulo.